Nhau - Iyo Tembiricha inoratidza kuputira bhodhoro
Kugadzirisa dambudziko remvura yekunwa munguva yechando, sarudzo yekutanga mumatsutso uye munguva yechando - thermos bhodhoro
Pakupera kwaGunyana, mamiriro ekunze akatonhorera ipapo ipapo, uye kwaizove nekuratidzwa kwekutonhora mangwanani oga oga nemanheru. Muchokwadi, pamusoro pekupfeka zvakawanda, kutarisisa kudziya kunogona kugadzirisa dambudziko hombe. Mumwaka uno, tinogona kusarudza mvura inopisa inodziya pachinzvimbo chemvura inotonhora inotonhora, kunyanya mumatsutso kana kuchidziya uye kuchitonhora. Uye kune akawanda mabhodhoro e thermos pamusika. Zvinogona kutaurwa kuti ivo vese marudzi. Saka pane here bhodhoro re thermos rinosanganisa kwenguva refu kuputira uye kusimba kutakurika?
Iyi isina simbi yekutsiva guchu inosangana nezvose zvandinoda zvevharumu mabhasketi. Panyaya yekufananidzwa kwemavara, pane akawanda mavara ekusarudza kubva uye anogona kuve akagadzirwa. Iyo yakachena color scheme inogona zvakare kuwedzera kuzivikanwa uye kudzivirira zvikanganiso. Panguva imwecheteyo, pearlescent tekinoroji iri pamusoro inovandudza mhando yehombodo, kunyangwe ikasashandiswa, inotaridzika zvakanaka patafura.
Hukuru hwacho hwakaringanawo, nehurefu hwe235mm uye dhayamita ye65mm, hapana dambudziko nekutakura uchitenderera zuva nezuva. Kurema kwacho kunodzorwa panosvika 180g, izvo zvisina kunyanya kusiyana nehuremu hwenharembozha dzatinowanzoshandisa. Nesimba rekusarudza re300 ~ 500ml, hapasisina, hapana pasi, imwe-yenguva yekubika kofi inogona kusangana zvizere nekunwa kwevanhu vazhinji.
Muchokwadi, iwo musimboti webhodhoro re thermos rakangofanana, ese ayo anovandudza kuputira maitiro nekuwedzera kusagadzikana kwemhepo. Ehe, iri bhodhoro re thermos harisi izvo, asi rinogona kunzi ndiro rekupedzisira mukuvhara. Iri bhodhoro re thermos rine zvakare nyowani yebhatiri yekutsiva basa, iyo inogona kuongorora uye kudzora tembiricha yebhodhoro chero nguva uye chero kupi, uye kuzadzisa kwekupedzisira mukuvhara.